Ndithandana neStumbleUpon | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 25, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyathanda ukwabelana ngezibalo… nantsi icandelo lezibalo zemithombo ekubhekiswa kuyo kwibhlog yam apha. Enye yezinto oza kuyiphawula yile StumbleUpon ngokukhawuleza iba sisixhobo esikhulu sokudlulisela kwindawo yam. Zombini ubungakanani kunye nomgangatho wazo ziyahluka, uya kuqaphela ukuba uninzi lweendwendwe lubambelela ngaphezulu kwephepha elinye.
IStumbleUpon yenza ukuba kube lula ukuphonononga iisayithi. Ndisebenzisa i-StumbleUpon toolbar kwiFirefox endithumela kumaphepha endinokuba nomdla kuwo, indivumela ukuba nditsho ukuba ndiyabathanda okanye andibathandi, indivumela ukuba ndiphonononge amaphepha endiwakhethileYO kwaye indivumele ukuba ndinxibelelane nabanye abantu sebenzisa inkonzo. Wowu!
Ngelishwa, kuya kufuneka 'ukhubeke' kwindawo yabo. Basadinga iNjineli yokuSebenza ukunceda ukwenza imephu kwindawo ... nokuba yeyiphi na eyimpumelelo nangona. Ndiyayithanda kubakhenkethi abandizisayo, kunye nenethiwekhi enkulu kunye neempawu zokubhukisha. Ilula kwaye ayisindi! Ndiyathemba ukuba bayaqhubeka nokwandisa iindidi zabo. Babangcono kancinci kunokuba Digg, kodwa kunzima kwicandelo.
utyelelo Ukukhubeka kwam iphepha. Namhlanje uya kufumanisa ukuba ndikhubekile kule ndawo intle: UBilly Harvey. Umsebenzi weFlash, ukukhangela kwisiza, iziphumo zomculo otshintsha indawo njengoko uzulazula…. Wowu. Enjani yona ukuba ntle indawo! Ungawuthanda okanye ungawuthandi umculo (uyayiculela!). Ndiyoyika nje le ndawo.
tags: izibaloukugqubeka kwi
Okt 26, 2006 ngexesha 1:08 AM
Enye yezithuba zam ikhubekile okwethutyana umva-ndicinga ukuba ndinento efana ne-70-80 ebetha kuyo! Ndiyilutha kakhulu incasa yam ngoku, nangona 😛
Okt 26, 2006 ngexesha 7:02 AM
Into ehlekisayo-bendijonga izibalo zam zebhlog phezolo kwaye ndiqaphele ukuba uStumbleupon undithumelele iindwendwe ezintsha ezingama-30. Kum, oko kubonisa iipesenti ezingama-80 zezithuthi zam zosuku-kwaye andikaze ndive ngeStumbleupon ngaphambili… kufanelekile kuba undidibanise nendlela ethile. Andikwazi ukubulela ngokwaneleyo, Doug, ngayo yonke into oyenzayo. Qhubeka uyenze !! Itsheki eposini (hee hee).
Agasti 16, 2008 ngo-4: 40 PM
Ulwazi olukhulu! Enkosi ngokubhala oku. Kuliwonga ukuthatha inxaxheba kwingxoxo.